“Ho Hitanay Ianareo Ary Hahantonay” : Rahonana Ireo Blaogera Rosiana Noho Ny Ezak’Izy Ireo Mamoaka Ny Fiainana Manokan’ireo Cossacks Mpanohana Ny Governemanta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Jona 2018 6:21 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Magyar, русский, English
Cossacks manafika fihetsiketsehana am-pilaminana iray : sary nalaina avy amin'ilay sarimihetsiky ny taona 1965, Dokotera Zhivago // sary nalaina sy nahitsin'i Frederick Young, Wikicommons
Rehefa nifamory tao Maosko, Rosia ireo mpanao fihetsiketsehana ny 5 May 2018, mba hanohitra ny filoha Vladimir Putin tamin'ny hiakam-pitolomana hoe “Tsy tzar izy ho antsika“, tsy hoe fotsiny nifanehatra tamin'ireo polisy mandrava korontana ry zareo fa koa taminà vondrona Cossacks iray mitam-piadiana ivelan'ny tafika, mitafy fanamiana nentim-paharazana sy fiafenana.
Afaka hitanao ao anaty sehatra iray notsoahana avy amin'ilay sarimihetsika Dr. Zhivago ireo Cossacks midaroka mpanao fihetsiketsehana amin'ny nagaika (Fikapohana vita avy amin'ny hoditra nohamafisina), teo ambany fiarovana fenon'ny polisy Rosiana mpandrava korontana – OMON (Otryad Mobilny Osobogo Naznacheniya na ‘Special Purpose Mobile Unit’ (Andiany manokana afaka mivezivezy) ilay vondrona.
Ny Cossacks, vondrom-piarahamonina manana fombandrazana miavaka, no niaro ireo sisintany manerana an'i Rosia nandritra ny vanim-potoana isankarazany teo amin'ny tantaran'i Rosia ho takalon'ny fahaleovantena sarintsariny teo ambany fifehezan'ny Tzarista. Tany am-piandohan'ny taonjato faha-20, nampian-dry zareo ny fanjakana hanaparitaka hetsi-panoherana maro nanohitra ny governemanta ary nenjehina ihany koa ry zareo tamin'ny andron'i Joseph Stalin. Ankehitriny, miasa manao asanà polisy any amin'ny tanàna sasantsasany ao Rosia izy ireo izay indraindray miteraka resabe noho ny fidarohany tsy misy mpanelingelina ireo mpikatroka mafàna fo.
Azo an-tsary avokoa ireo fidarohana nitranga vao haingana, ary nampiasain'ireo Rosiana mafana fo izany sary izany hilazàna ny mombamomba ireo Cossacks, tonga hatrany amin'ny ezaka avy amin'ny mponina amin'ny famoronana fantsona Telegram “Angondrakitr'ireo mpihantsy, mpandrava fihetsiketsehana, ary mpikarama an'ady.” Ankehitriny, voalaza fa norahonana ireo mafana fo ireo sady navoaka ny mombamomba azy.
Araka ny anarana nomena nmena ilay fantsona Telegram, avy amin'ny Andia-miaramaila Foibe Cossack ireo Cossacks voalaza eto ireo, fikambanana vatsian'ny biraon'ny ben'ny tanànan'i Maosko vola ary nofanina handrava hetsi-panoherana. Ara-tantara dia hita betsaka ao amin'ny faritra Atsimon'i Rosia, ao Siberia ary ny Farany Atsinanana ny vondrom-piarahamonina Cossack, fa ireo vao niforona hafa kosa no ao Rosia afovoany. Somary mampiahiahy ny toerana misy azy ireo eo anatrehan'ny lalàna ary itarainan'ireo Cossacks “taloha” ny amin'ireo “mpisandoka” ireo izay mitondra ny marika sy ny fanamiana nentim-paharazana ary mitondra tena toy ny jiolahim-boto voakarama, izay matetika hodian'ireo polisy fanina.
Ilay fantsona Telegram, izay nosokafana ny ampitson'ilay fihetsiketsehana “tsy tzar izy ho antsika”, dia napetraka hiasa avy hatrany mba hahafantarana hoe iza marina ireo Cossacks voaresaka ireo. Nanaiky ny fidiran'ny olon-drehetra ao ireo mpanoratra an'ilay fantsoma, ary aorian'ny fanamarinana porofo, toy ny hoe fampifandraisana ny marika famantarana sy ny endrika amin'ny alalan'ny sary avy amin'ny mombamomba anao any amin'ny media sosialy, hamarinin'izy ireo ary havoakany izay torohay heveriny fa mendrika.
Tamin'ny fampiasana ity fomba fiasa avy fandrantoana ifotony ity, vitan-dry zareo ny namantatra Cossacks maromaro avy ao amin'ny Andia-miaramila Foibe Cossack. Raha toa ny iray tamin'izy ireo ka voasazy handoa lamandy kelikelytaorian'ny hasosoran'ny olona, nandà mafy ny fanendrikendrehana ny mpikambana ao aminy ho tafiditra amin'ny fomba ofisialy tamin'iny ny Andia-miaramila Foibe Cossack, tamin'ny nilazany fa azo isaina tamin'ny ratsan-tanana ireo tonga tao ary tamin'ny nanambaràny fa jiolahimboto misandoka ho Cossacks ny ambiny tamin'ireny. Lazaina fa ireo vitsy an'isa ireo dia nodarohan'ireo namany noho ilay fandraisan'izy ireo anjara “tsy nahazoana alalana” tamin'ilay herisetra teny an-dalambe.
Raha niezaka ny nihataka tsy ho ao anatin'ny hetsik'ireo mpikambana vitsy avy ao aminy ireo manampahefana Cossack, mitatitra kosa ny mpanoratra avy ao amin'ilay fantsona Telegram fa mahazo fandrahonana ho faty ry zareo ankehitriny. Taerin'izy ireo ihany koa ny amin'ny fitsikilovana ny fitaovany sy ny kaontiny. Nalefan'ny mpanoratra ao amin'ilay fantsona ho any anaty YouTube-n'i Alexey Navalny ihany koa ny tantaran-dry zareo, Alexey Navalny izay mpikatroka mpikarakara fihetsiketsehana manohitra kolikoly no sady bilaogera. Dozhd, orinasam-pampahalalam-baovao tsy miankina izay matetika mifandray amin'ireo endrika fantadazan'ny fanoherana, no nanoratra ity manaraka ity :
Nanomboka tamin'ny andrana vitsivitsy hijirihana ny Bot-n'ilay fantsona ilay izy, ary avy eo dia nanomboka niseho ny fandrahonana mahafatifaty : ‘Ho Hitanay Ianareo Ary Ho Hahantonay’, ‘Hovonoinay Ianareo ’. Taty aoriana tanaty aterneto, hita fa nisy fampahafantarana diso, izay noforonina tsotra izao momba ny fiainanay manokana. Ohatra, milaza izy ireo fa manana fiaramanidina manokana aho, trano iray ao Etazonia, ary zom-pirenena roa…ankoatra ny hafatra manokana sy ireo antso feno fandrahonana, tojo olana ara-teknika indray ny mpandrindra ato aminay androany, ary misy fandrindràna fanafihana viriosy atao amin'ny fitaovanay.
Tonga ireny fandrahonana ireny satria ireo antsoin'ireo ho Cossacks milaza fisokafana vanim-potoana ho an'ireo mpanoratra ao amin'ilay fantsona Telegram. Maro ireo vondrona nanokatra tambajotra fampahalalam-baovao sosialy Rosiana miaraka amin'ny tanjona hàka tàhaka ny fomba fanao manangona torohay avy any ifotony mba hamoahana vaovao momba ireo mpanao fihetsiketsehana nanokatra ilay fantsona Telegram “Angondrakitra“. Maro no mampiasa ny teny filamatra hoe “Ombay Mitady : Fahavalon'ny vahoaka.”
Araka ny tatitry ny gazety Nezavisimaya Gazeta, misy fanehoankevitra mafana toy izao ao amin'ireo vondrona ireo : “Inona no manakana antsika tsy handroaka ny tomponandraikitra ao amin'io loharanom-baovao io ?” Ary “Nahoana no tsy misy mitifitra izy ireo ?” Alexandr Plyushev, mpanao gazety ao amin'ilay Onjam-peo tsy miankina Akon'i Maosko, dia mahita izany ho fihetsehana farany amin'ny adin'ny famoahana fiainana manokana ifanaovan'ireo mpanohana ny governemanta sy ireo mpanohitra mafana fo. Niantso ny fahitana ilay fantsona “Angondrakitra” efa hatry ny ela, hoy i Plyushev :
Hafahafa ihany ny fahitàna hoe vao nivoaka ity karazan-javatra ity, satria efa fampiasa hatry ny ela io teknolojia io hiadiana amin'ireo mpanohitra mafana fo, ireo mpitarika ary ny olona entiny manokana. Fantatry ny maro ilay vohikala Je Suis Maidan ary nandritry ny herintaona teo izay no mamoaka ny anaran'ireo mpandray anjara amin'ireo fihetsiketsehana sy mandrahona mivantana azy ireny. Vao nisy fampitandremana iray hafa talohan'ny 5 May. Talohan'izay aza, ilay vohikala Whoiswhos (izay efa nanjavona ankehitriny) no nanao zavatra mitovitovy amin'izay, nifantoka tamin'ireo blaogera mpanohitra. Nisy nifandraisany tamin'ny asa nosahanin'ilay vohikala ireo fanafihana nisesy nitranga tamin'ireo mafana fo nitambatra ho andiany tao St. Petersburg ny Lohataona 2016 .
Ahian'i Plyushev ho fambara hitondra ady an-trano iray hafa ao Rosia ireny fitomboan'ny herisetra ireny.
Notsipihan'ireo mpiserasera anaty aterneto ihany koa ny fahasamihafana misy eo amin'ny miaramila ivelan'ny tafika manaparitaka hetsika am-pilaminana sy ireo fampanantenana ny amin'ny ho avy ataon'ny ben'ny tanànan'i Moskoa :
Sergey Sobyanin [ben'ny tanànan'i Moskoa]: ‘Moskoa dia tanàna gaovambe iray moderna miaraka amin'ireo renivohitra sangany manerana izao tontolo izao ary mavitrika manatsara ny harena arak'olombelona ananany.’
Ny tena zava-misy: ao amin'ny kianja afovoan'ny tanana, ireo Cossacks, tohanan'ny polisy misahana ny rotaka,mpandrava korontana, dia midaroka amin'ny karavasy vita amin'ny hoditra ny ‘harena arak'olombelona’.
Vonona ny hitoetra ho mailo hatrany ilay fantsona “Angondrakitra” any amin'izay hetsika rehetra ahitàna Cossacks. Nanokatra pejy Facebook ny mpanoratra mba hahazoana antoka fa ho lasa lavitra ivelan'ny Telegram ireo vaovao voaray.